Arrimo Horumarineed ayaa laga wada hadlay Gobolka Samara - Nidaamka baradhada
Gobolka Samara ayaa looga hadlay horumarinta xulashada iyo soosaarka abuur baradho ah
Jun 23, 08:21
Iyo ku saabsan. Wasiirka Beeraha ee gobolka Samara Yevgeny Afanasyev wuxuu kala hadlay wakiilo ka socda beeraha baradhada iyo machadyada cilmi baarista heerka ay ka taagan yihiin hirgalinta mashruuc cilmiyeed iyo farsamo oo dhameystiran (KNTP) oo loogu talagalay koritaanka iyo abuurista baradhada.
8 urur goboleed ayaa kaqeyb galaya barnaamijka CSTP ee gobolka. Waxaa ka mid ah tilmaamayaasha waxqabadka: tirada noocyo cusub oo tartan oo gudaha ah oo baradho ah, mugga baradhada abuur la soo saaray oo la iibiyay ee xulashada guryaha ee heerka sare, tirada badeecooyinka cusub ee ilaalinta baradho noolaha iyo kuwo kale oo badan.
Iminka, mashruucu wuxuu soosaarayaa 4 nooc oo baradho ah oo cusub. Shaqada xilliga gu'ga ee waqtigeeda, sida laga soo xigtay kaqeybgalayaashu, ma keenayso walaac xagga mugga wax soo saarka "elite".
Intii kulanku socday, ayaa laga wada hadlay arrimaha la xiriira helitaanka lacagaha amaahda iyo taakuleynta howlaha aasaasiga ah ee kaqeybgalayaasha KSTP.
Tags: KNTPGobolka Samaraabuurista noocyo cusub oo baradho ah